Advanced Technology inay Dardar Badalka ee Turkey Domestic Car | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaAdvanced Technology inay Dardar Badalka ee Turkey Domestic Car
04 / 01 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
turkiyenin technology sare si loo dardar-ka beddelaad gaariga gudaha
Bursa by University of Technical Turkey ee Automobile oo Bursa 'guddi oo Guddoomiyaha BCCI guests Ibrahim Burkay, ayaa sheegay in wax soo saarka gudaha gaari dardar doonaa labada dal dhexdhexaad-sare iyo beddelidda ee wax soo saarka farsmada heerka sare ah, "guuro Kuwani Turkey ee our Bursa abaabulay our garoon kasta wuxuu horseed u noqon doonaa horyaal sare. ”
Madaxweynaha BCCI Ibraahim Burkay, University Bursa Technical marti ah 'Car ee Turkey iyo Bursa biiray guddiga. Rector of BTU Dr. Arif Karademir wuxuu gudoomiye u yahay gudoomiyaha kulanka, oo uu dhexdhexaadiyay Burkay, qarnigii 21-aad, tartankii adduunka ee magaalooyinka heerka sare, ayuu yiri.
"CAR DEEGAANKA TURKEY EE isbedelka DARDARGALINTA doonaa"
Isagoo tilmaamay in magaalooyinka adduunka ay ku tartamayaan in kabadan dalalka adduunka, Duqa Burkay ayaa yidhi, olarak Sida Bursa, waxaan sii wadaynaa soo saarista iyo dhoofinta si aan uqabsanno waddankeenna. Safarkan, baabuurta guryuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan waddankeena iyo Bursa. Haddii aan soo galo inta u dhaxaysa 10 dhaqaalaha ee dunida ugu weyn, sheekada qorshaha kulankaan dalka Turkiga waa in kala duwan. Wadnaha sheekada waa inuu noqdaa mid dhexdhexaad ah oo sareeya. Socdaalkan, dhaqdhaqaaqa gawaarida qaranka iyo qaranku waxay ciyaarayaan door isbedel. ”
"XUQUUQDA BURSA IYO SINNAANTA XUKUUMADA BAARLAMAANKA CARRUURTA DALKA"
Isagoo carrabka ku adkeeyay in Bursa ay tahay mid ka mid ah xarumaha wax soo saarka ugu muhiimsan ee Marmara Basin, Duqa Burkay wuxuu yiri, olarak Sida BTSO, waxaan ka mid nahay hay'adihii ugu horreeyay ee soo dhaweynaya mashruuca gawaarida qaranka kaas oo ahaa horumar weyn marka la eego aragtida iyo yoolalka bartilmaameedka waddankeenna ee uu hoggaaminayo Madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan. Haddii gawaarida guryaha la soo saari doono; Waxaan soo bandhignay in Bursa ay noqon doonto xarunta ugu mudan ee aqoonteeda, khibradeeda iyo awooddeeda ah fursad kasta. Wadamada adduunka ee gawaarida gawaarida korantada ku shaqeeya ayaa soo maray waddo dheer. Hadaanu nahay Bursa, waxaan haysanaa fursad fiican horteenna. Bursa ee Turkey ee qaybo is awood badalka dhaqdhaqaaqa, mashruucan ku siin doonaa saldhig adag u istaagaan on. Kusoo uruurinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Bursa ayaa ahaa qodobka ugu weyn ee go'aankan. Waxaan si xoogan u aaminsanahay in mashruucan uu noqon doono mid waddanku ku guuleysto
"Gaadiidka CARRUURKA AH Waxay BURSA DHISI KARAAN HEER SAN AH"
Isagoo carrabka ku adkeeyay in tikniyoolajiyadda gawaaridu ay sidoo kale yihiin xoogga dhaqaalaha dhaqaalaha adduunka ee waaxyada sida meelaha, difaaca, duulista iyo nidaamyada tareenka, Duqa magaalada Burkay ayaa yidhi: In gobolka this abuuritaanka horeysay Turkey ee OIZ 1960, ay sii wadi doonaan in la siiyo jihada in ay gool naga qaranka. Bursa, Turkey noqon doonaa magaalada kuwaas oo aannu 60-sano ku riyoon. "
"WAA IN AAN AKHRISO WADA HADA adduunka
Isagoo tilmaamay in horumarada adduunka ay tahay in si wanaagsan loo falanqeeyo si loo xoojiyo awooda Bursa ee dhinacyada istiraatiijiyadeed, Duqa magaalada Burkay ayaa yidhi, Wez Waa inaan si fiican u akhrino adduunka. Haddii Detroit ay tagi lahayd duullimaadyo kala duwan iyadoo lagu saleynayay qaybta gawaarida waqtigaas, way fiicnaan laheyd. San Francisco ee dalka Mareykanka iyo Baden Württemberg ee dalka Jarmalka waa magaalooyinka qaabeeya dhaqaalaha wadanka. Waxaa la arkaa in magaalooyinku ay qoraan sheekooyinka guusha ee dalalka. ” Duqa magaalada Burkay wuxuu xasuusiyay in BTSO ay qabatay mashruucyo horseed u ah isbedelka dhaqalaha Bursa ee waaxyo kala duwan Waxaan rajeyneynaa in jaamacadaheena ay inbadan ka faa iideysan doonaan mashaariicdan. Sababtoo ah jaamacaduhu waxay ka ciyaaraan door ka duwan horumarka magaalooyinka. Waxqabadka R&D iyo waxqabadka cusub ee ku saleysan hal-abuurnimada ee aqoonyahannada iyo ardayda ayaa ku biirin doona horumarka dhammaan waaxahayada.
Rector of BTU Dr. Arif Karademir wuxuu sheegay in Bursa ay qortay sheekooyin guul leh oo cusub iyo khibradeeda wax soo saar. Karademir of automakers gudaha Turkiga, isagoo farxad weyn qabo in la soo saaray ee Bursa xusay, "Waxaan sii wadi doonaa in ay gacan iyo sidoo kale waxbarasho ee jaamacadda ee geedi socodka baabuurta qoyska ah. Waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno adduunka ganacsigayaga oo aan qaadno talaabooyin caam ah nidaamka soo socda
Agaasimaha, Xarunta Codsiga Gawaarida iyo Xarunta Cilmi baarista Kemal Furkan raritaanka, Bursa waa xarunta ugu muhiimsan ee Turkey ee suuqa baabuurta, ayuu yiri: "Waxaan u arkaan go'aanka saxda ah si loo soo saaro baabuur gudaha ee Bursa. Sababtoo ah Bursa waa magaalada ugu diyaarsanaanta dareenkan. Waxaan ka helay shaqada qaabka baabuurka maxalliga ah si aad u wanaagsan. Injineero Turki ah ayaa gabi ahaanba hagay mashruuca waxayna 14-15 bilood gudahood gaadhigu diyaar yahay. U samaynta heer ka sarreeya baabuurta badan lagu iibiyo badan oo Turkey. Waxay noqon doontaa SUV koronto ee ugu horreeyay Yurub sannadka soo socda. Nalalka bannaanka ayaa aad uga fiican qalabka nalka TESLA ee la isticmaalo. Waxaa jira xaqiiqo kale oo horteenna ah. Waxaan u baahanahay inaan faafin dhaqanka baabuur korontada ee Turkey. Sababta oo ah dunidu waxay isu diyaarineysaa xaqiiqadan, waa inaan u diyaar garoobnaa.
Kocaeli, Turkey ee R & D iyo Technology Center
Ankara-Istanbul Tareenka Xawaaraha Sare Heerka si loo dedejiyo Bilecik
Tareenka Xawaaraha Sare ee Dardargelinta Dalxiiska Bilecik
Mashruuca Tareenka ee Konya-Karaman-Mersin si loo dardar-galiyo dhoofinta Konya
IETT si loo kiciyo safarka
Azerbaijan si loo xoojiyo dhismaha wadiiqada woqooyi-koonfureed
3 ee Beykoz. Bridge iyo Üsküdar-Beykoz Subway si ay u kobciso Ganacsiga
Mashruucyada Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare si kor loogu qaado Gaadiidka
Dadka macmiisha ah ee Automobile Design The Mulkiilaha Turkiga lahaa Den
Jaamacada Farsamada ee Bursa
Warshadaha gawaarida maxalliga ah ee Bursa